China Ft mpe mpe akwa ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Jinqiu
Floordị okpukpu ala dị iche iche nwere ojiji dị iche iche, ọ bụghị pads niile ka a ga-eji maka ụdị ala ọ bụla. Ugbu a, ka m webata gị nke ọma ka ị nwee ike ịchọta pad kacha mma.
Ngwakọta Naịlọn / Polester.
25mm ọkpụrụkpụ ọkpụrụkpụ.
White were maka polishing nke echebe ala.
Uhie eji eme ihe eji eme ihe mgbe nile na ala echedoro.
Ojiji ojii maka nhicha miri emi, na ala ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Technicalbọchị Nka na ụzụ
Ihe C101B C101D
Nha 17 ” 20 ”
Mbukota 5pcs / ctn 5pcs / ctn
Mbukota size 440x130x440mm 515x130x515mm
Mkpokọta nha White 1kg, Uhie 1.1kg, ojii1.6kg White 1.6kg, Uhie 1.7kg, ojii2.3kg
Floordị okpukpu ala dị iche iche nwere ojiji dị iche iche, ọ bụghị pads niile ka a ga-eji maka ụdị ala ọ bụla. Ugbu a, ka m webata gị n'ụzọ zuru ezu ka ị nwee ike ịchọta pad kacha mma.
Uhie acha uhie uhie bụ maka mpempe ala nke nwere ike wepu akara akara na unyi, ma mee ka ala na-enwu ma na-egbuke egbuke. O zuru oke maka iji ọkụ rụọ ọrụ dịka ha agaghị emebi ala gị. Ha dịkwa mma maka ọrụ nhicha kwa ụbọchị yana maka igwe na-agba ọsọ dị ala. A na-akpọ mpe mpe akwa uhie dị ka ihe kachasị ike ma nwee ike iji ya mee ihe ma ọ bụ na-agba mmiri.
White agba bụ maka polishing pad nke bụ softest n'ala na mpe mpe akwa, ya kwesịrị ekwesị kwa ụbọchị ihe aga-eme nke ukwuu. Jiri ọcha polishing pad na a ala na-agba n'ala polisher na a mma mmiri alụlụ, nwere ike ime ka gị na ala sleek na gloss. Ekwesịrị iji pad ahụ mee ihe na ala akọrọ, dị ọcha iji gbakwunye wax dị nro na ngwụcha. White polishing pad agaghị adịru na ederede ederede, ma ọ gaghị adabara igwe dị elu.
Black agba n'ala pad nke bụ stander agba nke agba pad, ha nwere ike kpamkpam wepu imecha, sealer, waxes na unyi otú i nwere ike nụchaa gị n'ala. Ha na-eme ihe ike ma na-eme ihe ike ma jiri ya rụọ ọrụ na igwe dị ala.
Site na iwebata agba na ọrụ nke pad ụlọ, anyị ga-enwe nghọta ọhụrụ banyere nhọrọ nke mpe mpe akwa, ekwenyere m na ị nwere ike ịhọrọ ihe ziri ezi maka ala gị. Ọ bụrụ na ndị a anaghị egbo mkpa ala gị, biko kpọtụrụ anyị, anyị nwere ike ịhazi dịka ihe ị chọrọ.
Nke gara aga: Mgbanwe polishing Kedo akwa
Osote: Steel ajị anụ
Steel ajị anụ
Mgbanwe polishing Kedo akwa